IMcFIT-ilogo entsha, umfanekiso omtsha > UVielhuber uDavid
IMcFIT-ilogo entsha, umfanekiso omtsha06
Umxokelelwano wokuqina wesaphulelo uMcFIT uzinikezele ngokwabo. Ngelixa i-mascot etyheli eqaqambileyo ngohlobo lwebhanana ihombise unobumba ohlaza okwesibhakabhaka, isaphetha esimthubi kwimibala enombala we-anthracite ngoku sityibilikiswe ngobuchule kwaye ngenxa yoko senza ubume obungabonakaliyo. Imibala ye-FDP eluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi ayiniki kuphela ilogo, kodwa nazo zonke ezinye izinto zokuprinta uphawu lweMcFIT.
Ndiyathandabuza ukuba indibaniselwano yam kunye neetawuli yenzelwe abaqulunqi bearhente yobumbano. Okwangoku, ndiyayibona ilogo njengenyathelo elinesibindi. Ummangaliso unomdla nje. Yonke into ekucingelwe ngayo inokubonwa kulungelelwaniso lopelo ukusuka "McFit" ukuya "McFIT" - mhlawumbi ukubeka ilogo kwisiseko esibanzi.
Ikhonkco lomzimba ngokubanzi lifuna ukusuka kude nexabiso eliphantsi liye kumfanekiso weprimiyamu-ngokuhambelana nokunikezelwa kwamava eMcFIT . Ukongeza kwisazisi esigcweleyo, amaxabiso atshintshiwe kwaye anyuswa nge- € 3.00 ngobusuku. Emva kwayo yonke loo nto, ngoku ungahlamba simahla.
Iphulo elitsha likaTwitter kufanelekile ukuba likhankanywe- apho kukho into encinci kodwa enkulu eyenzekileyo kwiqela lezentengiso. I-hashtag #derwilleindir iboniswe ngezithuba (mhlawumbi ukuze ifundeke ngcono) kwiiposta ezahlukeneyo. Ingxaki: Ngoku kukho ii-tweets ezingaphezulu kunye ne-hashtag #der . Ukuhlazisa kangakanani.
Iphulo elitsha likaTwitter